विभेद अन्त्य गर्न पहिले महिला नै महिलाको हितैषी बन्नुपर्छ | Citizen Post News
विभेद अन्त्य गर्न पहिले महिला नै महिलाको हितैषी बन्नुपर्छ
'महिलाहरु महिलाकै साख्ये बन्न सग्दैनन भने पुरुषले मात्र महिलामाथि हिंसा गर्छ भनेर वेतुकका कुरा किन गर्दा हुन् ? आफूले अधिकार पाएपछि अरुले पाउन् कि नपाउन् महिला अधिकारकर्मीलाई के मतलव छ ? महिला अधिकार र विकासका खोक्रा आर्दश साँधेर आफ्नो पोल्टो भर्ने मात्र काम गरेका छन् उनीहरुले । खासमा महिलाले महिलालाई नै आफ्नो शत्रु ठान्छन र त उनीहरु झनझन पछि धकेलिएका हुन् ।'-महिलाले अधिकारका कुरा गर्न थाले कि समाजका ‘टाठाबाठा र गन्यमान्य’ कहलिएका पुरुषहरुले यसरी आफ्ना ‘टिप्पणी’ पेश गर्थे ।
महिला अधिकारका बारेमा खोजीनीति गर्ने बेलामा सुनेका यस्ता टिप्पणीले मलाई पनि झनक्क हुन्थ्यो । महिलाद्धारा शासित, परिचालित त आश्रित हुन नचाहाने पुरुषहरुको मात्र सोच हो भनेर प्रतिवाद गर्थें । आधिकार पाएका, निर्णायक तहमा भएका अधिकारविहीन र हिंसामा परेका महिलाको अधिकार र न्यायको लागि हुरुक्क भएर लागेका छन् भन्ने लाग्थ्यो । महिलाको व्यथा महिलाले मात्र बुझ्छन् भन्ने विश्वासमाथि ठेस लागेको छ, समाजमा देखिएको महिला-महिला विचको विमती, शत्रुता, इस्र्या र कुण्ठा देख्दा ।
शक्ति मुठ्ठिमा भएकाहरुले शक्तिहिन माथि शासन गर्छन् । जसरी परापूर्व कालदेखि पुरुषले महिलामाथि गरे । महिलालाई माध्याम बनाएर आफ्नो शक्ति प्रर्दशन गरे, सर्वोच्च कहलिए । तर समयले सधैं पुरुषलाई राज गर्न दिएन । अधिकार नपाएको कुण्ठा बोकेर वाँचेका महिलाले शक्तिमान पुरुषसंग भिड्न खोजे तर सकेनन् । बरु आफू भन्दा कमजोर महिलामाथि नै हैकम जमाउन थाले । सासुले बुहारीमाथि, जेठानीले देउरानीमाथि, नन्द आमाजुले भाउजुवुहारी माथि । हाम्रा जिजु, बज्यैको पालादेखिएको यो प्रवृति अहिले पनि हटेको छैन बरु वढ्दो छ ।
आफूले भोगेको जस्तो अवस्था अरु महिलाले भोग्न नपरोस भन्ने सोच कमै मात्र महिलाको छ । कहिले सासुको पालो काहिले कहिले बुहारीको पालो । आधिकार दिने कुरामा होइन अवसर गुमाउने कुरामा यस्तो उद्गार लगाएर विश्लेशण गरिन्छ । अधिकारविहिन आफूभन्दा साना र कमजोर माथि शासन गर्ने होडबाजी महिलामै बढि देखिन्छ । महिलाहरुले अघि वढ्ने र अधिकार पाउने नाममा महिलामाथि नै ज्याजती गर्ने प्रवृति अझैपनि हावी छ । धेरै महिला सासुकै कारण हिंसा सहन बाध्य छन् हाम्रो समाजमा ।
अघि बढ्न चाहने महिलालाई परिवारमा महिला सदस्य बाटै सहयोग हुदैन । घरायसी चुनौती पार गरेर अघि बढे पनि समाजका अरु महिलाको इस्र्याको पात्र बन्नुपर्छ । कार्यालयमा पनि महिलाले आफ्नो हाकिम महिला नै भएको सहर्ष स्वीकार्न कठिन मान्छन् । को माथि पुग्ने भनेर भित्रभित्रै कुण्ठा र अवस्थ्य प्रतिस्पर्धा चल्छ । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल र उपमेयर पार्वती शाहविच शक्तिको द्धन्द चलिरहेको छ । केही दिनअघि उपमेयर शाहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै दाहाललाई मेयरमा जिताउनु गलत भएकोसम्म भन्न भ्याइन । सायद आफूभन्दा भाथि पुरुष नेतृत्व हुन्थ्यो भने यसरी भन्न सक्थिनन् कि ?
महिला अधिकारकर्मीले पनि बाहिरी रुपमा महिलाको समविकास, परिवर्तन, अधिकार र न्यायको कुरा अन्तरआत्मादेखि महिलाको महत्व र आवस्यकता स्वीकार्न सकेका छैनन् । शिक्षित महिलाले नै पनि छोरा र छोरीलाई गर्ने व्यवहार समान छैन । म बस्ने टोलकी एक भद्र अधिकारकर्मी महिलाले आफूले छोरो पाउनको लागि ६ पटकसम्म गर्भपतन गरेको बताइन् । सोधेँ-श्रीमानले गर्भपतन गर्ने दवाव दिएर हो कि ? उनले भनिन् -'होइन श्रीमानले त २ छोरी भएपछि बच्चा नपाउने भन्नुभएको थियो । मेरै इच्छाले पाएको, एउटा छोरा नभै त कहाँ हुन्छ र ?'
यीनको जस्तो सोचाइ धेरै महिलामा छ । फरक यति हो कसैले देखाउँछन् कसैले लुकाउँछन् । छोरीको आवस्यकता नै महसुस नगर्ने हाम्रो समाजका महिलाले अरु महिलासँग कसरी साख्ये हुन सक्लान् ? महिला अधिकारका र न्यायका लागि लड्छु भन्ने महिला पनि आफ्नो झोली भरिएपछि अन्तै हराउँछन् । ‘हाम्रो पनि दिन आउँछ नआत्तिनुस’ भनेर अधिकारविहीन महिलालाई जग बनाई माथि उक्लनेहरु माथि नै रहे, फेरी तल झरेनन् । सुदिन कुरेर बसेकाहरुको दिन फिरेन तर उनीहरुलाई कुराउनेका रात पनि दिन जस्तै उज्याला भए ।
हो समय वलवान् र परिवर्तनशिल छ । समयक्रमसंगै महिलाका अधिकार पनि स्थापित हुदै गएका छन् । तर देशका कुना कप्चामा रहेर अधिकारको सपना देख्नेहरु त्यसको भागीदार हुन सकेनन् । धरै महिलाहरु अधिकारका लागि लडे, धेरै माथि पुगे । तर आफ्ना लागि मात्र । समय जस्तै बलवान र परिवर्तित भए उनीहरु । सामाजिक बञ्चितीकरणमा परेका महिलाको आवाज सहरा बन्न भने सकेनन् ।
आफू शक्ति सम्पन्न नहुन्जेल सबैलाई आफू जस्तै देख्छ मान्छे । शक्ति सम्पन्न भएपछि सबैलाई कमजोर । यही मनोवृति महिलामा पनि देखिन्छ । पुरुषसँग त परापूर्व कालदेखि नै पितृसत्ताले प्रदान गरेको शक्ति छ । घरभित्र र घर बाहिर पनि परिवारको प्रतिनिधित्व उसैले गर्छ । यसबाट परिवारका शक्तिविहीन सदस्य विशेष गरि महिला त्यही पुरुष शक्तिको नजिक रहनका लागि प्रयासरत रहन्छन् । शक्ति आफ्नो पोल्टामा पार्नका लागि महिलाहरु एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । यसो गर्दा आफूजस्तै अर्की महिला उपेक्षित भएको भुसुक्कै विर्सन्छन् । उ भन्दा म ठूलो भन्ने भ्रमले एक अर्का विच वेमल भैरहन्छ ।
कमजोर भनिएकाहरुसँग शक्ति संरचना परिवर्तन गर्ने आँट हैसियत रहँदैन । त्यैले त उनीहरु आफूमाथिको दमनको प्रतिकार नजिकको प्रतिद्वन्द्वीसँग गर्छन । अनी आफूजस्तै वर्गमाथि हैकम चलाउछन्, शत्रुता जन्माउँछन् । यही प्रवृतिले महिला महिला विच गलत र पूर्वाग्रही विचार स्थापित भएको छ । महिलामाथि हिंसा र विभेदजन्य हरेक घटनाका अन्तरनिहित कारकतत्व केलाउन सके र त्यसको उचित विश्लेषणसहित सम्बोधन गर्नसके मात्रै महिला अधिकार स्थापित गर्न सकिन्छ ।
पुरुष वा पितृसत्तालाई मात्र दोष दिएर महिला अधिकारको जग बसाल्न खोज्दा खास अधिकार पाउनुपर्ने वर्गको अधिकार भासिदै गएको छ । हाम्रो आनीबानी र व्यवहार सुधारिएको छैन । समाज सभ्य होईन, झन बर्बर बन्दै गएको छ । त्यसैले महिला पुरुषको समविकास र सामाजिक न्याय स्थापना गर्न र महिला विरुद्धका विभेद अन्त्य गर्न पहिले त महिला नै महिलाको हितैषी बन्न सक्नुपर्छ । होईन भने जमाना परिवर्तन हुन्छ, अधिकार खोस्न सक्नेले अधिकार प्राप्त पनि गर्न सक्छन् । तर कमजोर वर्ग सधैँको पछाडी नै रहन्छन् ।